“Buugga Trump been baa ka buuxda”
January 5, 2018 10:14 am in Features, News. by Hargeisa.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in buugga laga qoray ay ku jiraan eedo dhaawacaya maamulkiisa uuna yahay “mid been ah”.
Buugga waxaa diyaariyay Steve Bannon, oo ahaan jiray kaaliyihii istiraatiijiyadda Aqalka Cad, wuxuuna qeexayaa in “la kullankii koox Ruushka ka socotay oo wiilka Trump uu fadhiyay” uu ahaa “khiyaano”.
Buugga wuxuu sidoo kale sharaxayaa in Trump ay amakaag iyo fajac ku noqotay in uu ku guuleystay xilka madaxweynaha.
Qareennada Trump waxay ku dadaaleen in ay hor istaagaan daabacaadda buugga oo Aqalka Cad uu aad uga careysan yahay: Waxaa loogu maagacdaray Gudaha Aqalka Cad ee Trump, waxaana qoray Michael Wolff. Buugga ayaa hadda la iibinayaa.
Kullanka la sheegay in Ruushka lala yeeshay oo uu ka qeybgalay wiilka curadka u ah Trump, waxaa baaritaan ku haya guddi gaar ah oo uu hoggaaminayo Robert Mueller, kaas oo eegaya xiriirkii ka dhexeeyay kooxdii ololaha u qaabilsanayd Trump iyo Ruushka iyo kaalintii uu ku lahaa guushiisii madaxtinimo.
Madaxweyne Trump ayaa si adag u diiday eedahaasi iyo in ay dheceen kulamo noocaas ah.
Wuxuu sheegay Trump in Mr Bannon – oo shaqada laga tiray bishii August – uu “caqliga ka tagay” ka dib markii uu waayay xilkiisii Aqalka Cad.
Khamiistii, Maamulka Aqalka Cad wuxuu sheegay in uu dhanka Galbeedka ee dhismaha laga mamnuucay qalabka dadka ay sitaan sida mobile-lada oo ay sheegeen in amni xumo ay sababeen.